I-HBO Max vs HBO Manje - Yikuphi okungcono kakhulu ngo-2020? - Ezokuzijabulisa
I-HBO ithandwa kakhulu ngokuqukethwe okukhethekile okubhaliselwe cishe iminyaka engama-50 manje, manje isebenza iziteshi eziyisikhombisa ezingamahora angama-24 ezigcwaliswe ngokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu kanye nokuqukethwe okunelayisense. Le nkampani yathatha izinyathelo zayo zokuqala yangena enkathini yedijithali ne-HBO Manje eminyakeni emihlanu emuva futhi ngenxa yalokho, yayisibeke isisekelo senkonzo engcono kakhulu ebizwa nge-HBO Max.
I-HBO Max vs HBO Manje - Ukubuka konke
Le sevisi ifaka ilabhulali enkulu ye-HBO yayo yonke imibukiso nama-movie woqobo anokuqukethwe okuningi okuvela enkampanini iWarner Media ongayithola kusevisi eyodwa yokubhalisa. Siyazi ukuthi akushibhile. Kepha, siqinisekile ukuthi ngeke ukwazi ukuthola okuningi kwalezi zinhlelo nama-movie kwenye indawo.
I-HBO Max iyisevisi yokusakaza. Kungabiza cishe u- $ 14.99 ngenyanga futhi kufaka yonke iminikelo ejwayelekile ye-HBO enezinto eziningi ezintsha.I-HBO Max ize ikhiqize imibukiso nama-movie woqobo ngendlela efanayo neNetflix, i-Amazon Prime Video kanye neHulu.
Abantu abebekade besebenzisa i-HBO Go noma i-HBO Now bazokwazi ukufinyelela i-HBO Max nemininingwane yabo ekhona ye-akhawunti ngaphandle kwemali eyengeziwe. I-HBO Max ifana nokuthuthuka kwamahhala futhi ibuyisela ezinye izinsizakalo.
Ufuna ukwazi ukuthi yikuphi okuhle kakhulu kusuka kuNetflix & Prime Video? Hlola I-Netflix vs I-Amazon Prime Video Ukuqhathanisa.
Yini i-HBO Max?
I-HBO Max iyisevisi yokusakaza engadingi ukubhaliswa kwekhebula ukuze isetshenziswe. Kubandakanya ukunikezwa okujwayelekile kwe-HBO futhi lokho kungakubiza cishe u- $ 14.99 ngenyanga futhi uzothola izinto eziningi ezintsha ezivela kwizakhiwo zeWarnerMedia, njengeCartoon Network, DC Comics, TNT, CNN, TBS.
Le sevisi yethulwe okokuqala e-United States cishe ngoMeyi wezi-2020, ibisithathe indawo yezinsizakalo ezimbili ezindala zokusakaza zenkampani ezaziwa nge-HBO Go ne-HBO Now. I-HBO Go ayisatholakali futhi i-HBO Manje yaba uhlelo lokusebenza oluzenzakalelayo lwe-HBO kumadivayisi ambalwa akhethiwe.Ngisho ne-HBO Max ikhiqiza imibukiso nama-movie woqobo, njengamanye amapulatifomu wokusakaza afana neHulu, iNetflix ne-Amazon Prime Video.
Le nsizakalo yethule ama-movie angaphezu kwe-1,300. Ngakho-ke, ngamafuphi, noma ngubani obesebenzisa i-HBO Go noma i-HBO Now manje uzokwazi ukufinyelela i-HBO Max nge-akhawunti yakhe ekhona ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. I-HBO Max inikezwa njengokuvuselelwa kwamahhala nokufaka esikhundleni sezinsizakalo ezindala.
Yini i-HBO Manje?
I-HBO MANJE yaziwa njengomlandeli we-HBO Go. I-HBO Manje isisusile isidingo sokubhaliselwe kwentambo.Abantu abaningi bebelokhu bezibuza ukuthi uyini umehluko wangempela phakathi kwe-HBO Go ne-HBO Now. Yebo, umehluko wangempela phakathi kwe-HBO Go ne-HBO Now wawungakaze ucace.
Ngenkathi i-HBO Now yethulwa okokuqala, yayifana kakhulu ne-HBO Go - okuwukuphela kwento ukuthi awudingi ukubhaliswa kwentambo, noma ngabe ubenokubhalisela ikhebula, bekungakunika ukufinyelela kuhlelo lokusebenza. Inakho konke okuqukethwe, izici, namakhono okusakaza njenge-HBO Go.
Bhalisela i-HBO Manje Isaphulelo Sezitshudeni
Yini eyenza i-HBO Max ihluke ku-HBO Manje?
I-HBO Max ne-HBO Manje zinamanani afanayo. I-HBO Manje ingumhlinzeki wesevisi osakazayo osekhulile oza nemibukiso yasekuqaleni ye-HBO.I-HBO Max inakho konke okuqukethwe yi-HBO Now futhi inezinto eziningi ezintsha futhi ngentengo efanayo.Uma noma ngubani kini abhalise ku-HBO Now uzokwazi ukubuka i-HBO Max nge-akhawunti yakho ekhona.
I-HBO Max empeleni yaziwa njengokuthuthukela ku-HBO Now.I-HBO Manje isevisi endala yokusakaza enayo yonke imibukiso yoqobo ye-HBO.I-HBO Max ne-HBO Manje zinokuqukethwe okufanayo.
I-HBO Max ngokuvamile ihlinzeka konke okuqukethwe kwe-HBO Now ngezinto eziningi ezintsha ikakhulukazi ezivela kumikhiqizo yeWarnerMedia ngo- $ 14.99 ofanayo ngenyanga. Njengoba i-HBO Max inikezela abasebenzisi bayo umtapo wezincwadi wokusakaza ongcono futhi omkhulu kune-HBO Now, kuyiqiniso ukuthi i-HBO Max iyona engcono kunazo zonke kulabo ababhalisile.
Uhlelo lokusebenza lwe-HBO Max okwamanje alutholakali kumadivayisi ambalwa aqaphelekayo afaka phakathi imikhiqizo yeRoku neFire TV.Ukukhuluma iqiniso, i-HBO Max iyisinqumo esingcono kubo bonke ababhalisile njengoba inezinketho ezinkulu zokusakaza nokuqukethwe okusha okuningi.
Izinhlelo & Amanani:
Yimalini i-HBO Manje ngenyanga?
I-HBO Manje inikeza abasebenzisi isikhathi sesivivinyo sezinsuku eziyisikhombisa. Ngemuva kokuthi isikhathi sesilingo sesiphelile, sekungaba ngu- $ 14.99 ngenyanga.
Yimalini iHBO Max ngenyanga?
Kuyafana ne-HBO Manje, i-HBO Max inesivivinyo samahhala sezinsuku eziyisikhombisa, bese kuthi ngemuva kokuqulwa kwecala, kube ngu- $ 14.99 ngenyanga.
Yikuphi okunemibukiso nama-movie amahle kakhulu?
I-HBO Manje ne-HBO Max zombili zinokuqukethwe okufanayo kwe-HBO okubandakanya imibukiso ethandwa kakhulu njenge-Euphoria, Game of Thrones, Last Week Tonight, nabalindi.
I-HBO Max inelabhulali engcono kakhulu futhi enkulu. Ngayo yonke into efanayo efana naleyo ye-HBO Now, uzokwazi ngisho nokuthola izinto ezintsha ezimbalwa. I-HBO Max inikeza imibukiso yoqobo efana ne-Love Life, Craftopia, On the Record, kanye ne-Legendary.
Kukhona nokuqukethwe kweWarner Media okufana namaPretty Little Liars, uRick noMorty, Abangani, nochungechunge oluphelele lweHarry Potter. Inekhathalogi ephelele evela kumanethiwekhi nama-studio afana neCartoon Network, CNN, Warner Bros., TNT, New Line Cinema, TBS, Studio Ghibli, The CW, Crunchyroll, ne-Adult Swim.
I-HBO Max ingaba yindlela engcono kuwe noma kunini ngoba iyintengo efanayo ne-HBO Now futhi inokuqukethwe okufanayo, izici kanye nezinto ezimbalwa ezintsha ongazithola ku-HBO Max. Ngalokhu, uzokwazi ukuthola yonke into i-HBO Now enikeza abasebenzisi bayo futhi enakho konke okwenziwe yi-HBO Go - kanye nokuqukethwe okuningi kwasekuqaleni kanye nomtapo wezincwadi omkhulu kakhulu. Uma usuvele ungumbhalisi we-HBO Now noma we-HBO Go uzokwazi ukusebenzisa i-HBO Max ngaphandle kwezindleko ezingeziwe. Yize, kukhona amadivayisi ambalwa angasekeli i-HBO Max. Ungavakashela iwebhusayithi yabo esemthethweni futhi uthole ukuthi ngabe idivayisi yakho iyasekelwa.
amasayithi okusakaza bukhoma ebhola lezinyawo
bukela ukusakazwa kwe-tv kwamahhala ku-inthanethi
bukela imibukiso ye-hd yamahhala
ungalanda kanjani i-mp3 kusuka ku-youtube ku-android
Igama lomsebenzisi ne-password ye-netflix mahhala
izingosi zama-movie zokusakaza zamahhala azibhalisi